इनरुवाको मुख्य बजारमा रहेको हनुमान बस्त्रालयमा भीषण आगलागी, आगो नियन्त्रणमा आएन !! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /News/इनरुवाको मुख्य बजारमा रहेको हनुमान बस्त्रालयमा भीषण आगलागी, आगो नियन्त्रणमा आएन !!
धरान । सुनसरीको इनरुवा मुख्य बजारको हनुमान बस्त्रालय बिहानै ५ बजेदेखि भीषण आगलागी सुरु भएको छ । इनरुवा–१ मुख्य बजारको हनुमान अटलले सञ्चालनमा ल्याएको हनुमान बस्त्रालयबाट आगलागी शुरु भएको हो । आगो अहिले सम्म पनि निय`न्त्रणमा आउन सकेको छैन ।
आगो निय`न्त्रणका लागि वराहक्षेत्र, दुहवी, इटहरी, धरान, सुन्दरहरैचा, विराटगनरका दमकलसहित नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, स्थानीयबासी जुटिरहेका छन् । हालसम्म पनि नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन । निय`न्त्रण लिने प्रयास जारी रहेको छ ।
मुख्य बजारमा बिहान ५ बजेतिर धूँवा देखियो । धूँवा देखिए पछि आगो लागेको अनुमान गरियो । मर्निङ वाकमा रहेका स्थानीय पत्रकार अजित झाले घटना प्रत्यक्ष रूपमा देखे ।
उनका अनुसार घडीमा ५ः०१ मिनेट गएको हुनुपर्छ । धूँवा देख्ने बित्तिकै उनले इनरुवा नगरपालिकाको दकमललाई फोन गरे । ‘सुरुमा त फोहोर जलाएको आगो रहेछ भनेर त्यति वास्ता पनि गरिन’ उनले भने, ‘नजिक पुरेर हेर्दा साँच्चै आगलागी भएको रहेछ, त्यसपछि लगत्तै इनरुवाको दकमललाई फोन गरेँ, बिग्रिएको भनेर खबर आयो ।’
उनले हनुमान बस्त्रालयमा आगो लागेको भनेर तत्कालै इनरुवाको दमकललाई खबर गरे । तर, त्यताबाट जवाफ आयो, दमकल बिग्रिएको छ । लगत्तै विद्युत् कार्यालयलाई फोन गरेर विजुली काट्न अनुरोध गरे । सोही बमोजिम विजुली काटियो । तर, झन्झन् आगोको मुस्लो बढ्दै गयो ।
आगलागी भएको क्षेत्रबाट तीन सय मिटर पर रहेको इनरुवा नगरपालिकाको दमकल काम नलाग्ने गरी बिग्रिएपछि छिमेकी नगरपालिकाको साहारा लिनुपरेको हो । जसका कारण आगो नियन्त्रणमा आउन अझै सकेको छैन ।